वाशिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विदेशी साइबर हमलाको अवस्थाबाट अमेरिकी कम्प्युटरलाई बचाउनका लागि राष्ट्रिय आपतकाल(संकटकाल)को घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार एक का...
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपाल (स्मार्ट नेपाल) को अवधारणा अघि सारेको बेला सरकारी निकायका दुई सय वेबसाइट ह्याक (डिफेसेज) भएको सूचना प्रविधिका विज्ञहरुले बताएका छन् । विज्ञका अनुसार डिजिटल नेप...
काठमाडौं । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कुनै मुलुकलाई तर्साउन नभई सहकार्य गर्न अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ । हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका मुलुकसँग सहकार्य गर्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तय भएको ...
काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले लबिङ बढाएका छन् । कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरुले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता...
काठमाडौं । नेपालीहरुको लोकप्रिय बैंक जनता बैंकले भरतपुर आँखा अस्पताललाई भौतिक सामाग्री र वीरेन्द्र विद्यामन्दिर क्याम्पस टीकापुर, कैलालीलाई पुस्तकालय सहयोग गरेको छ । जनता बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्त...
अबैध नाकाबाट २ करोड ८ लाख मुल्यको सामग्री भित्रियो
कैलाली । कैलालीमा भन्सार छलि गरेका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २ करोड ८ लाखका सामाग्री लिलाम गरी त्रिनगर भन्सार कार्यालयले १ करोड १९ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष ३ स...
आगामी बजेट क्षेत्रगत प्राथमिकतामा अल्झिदैन: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेट क्षेत्रगत प्राथमिकतामा नअल्झिने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/ ७७ काे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं अर्थ...
एजेन्सी । चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक तनाव झनै चर्किने सङ्केत देखिएको छ। साठी अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी समानमा थप कर लगाउने चिनियाँ घोषणापछि अमेरिकाका शेयर बजारमा त्यसको असर देखिएको छ। चीनको निर्णय सार...
आमसञ्चार विधेयक तयार, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको ...
करको दायरा बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको दायरा बढाउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक बृद्धिदर बढेका क्षेत्रमा तत्काल करको दायरा बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएका हुन...
काठमाडौं । कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा...
एउटै बाेकाकाे मूल्य ४ लाख ६५ हजार
झापा । धेरै नेपालीले बाख्रा पाल्छन् । बाख्राको मूल्य कति पर्छ भन्ने मोटामोटी अनुमान सबैलाई हुन्छ । तर, झापाको एक गाउँमा बाख्राको पाठाकै मूल्य पनि गाईभैँसी वा घोडाको भन्दा बढी छ भन्दा पत्याउन गाह्रो छ...
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनको गान्सु प्रान्तले नेपालको प्रदेश नं ३ सँग भगिनी साइनो गास्ने भएको छ। गान्सु प्रान्तको लान्झाउ महानगर र काठमाडौं महानगरपालिका बीच द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौता हुँदै ...
पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले अर्थमन्त्री खतिवडालाई दिए यस्तो सुझाव
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले एक वर्षको नियमित खर्च र दीर्घकालीन प्रकृतिका निश्चित नतिजा दिन सक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुझाव दिएका छन् ...
व्यापार वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री लिउ अमेरिका जाँदै
बेजिङ । चीनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ अमेरिकासंग व्यापार वार्ता जारी राख्न बिहिबार संयुक्त राज्य अमेरिका जाने भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री लिउको दुई दिवसीय यात्रालाई वाणिज्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ची...
एजेन्सी । अमेरिकाले इरानलाई एक ‘स्पष्ट र सिधा’ सन्देश दिनका लागि मध्यपूर्वमा आफ्नो एक युद्धपोत तैनाथ गरेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रिय सल्लाहकार जोन बोल्टनले ट्रम्प प्रशासनले यस्तो निर्णय ‘समस्या पुर्‍याउ...
अर्थ मन्त्रालयमा रोकियो भारतलाई तिर्ने सैन्य ऋण
काठमाडौँ । नेपालले सेनाका लागि ०६२/६३ पछि भारतसँग सैन्य सामाग्री खरिदबापत तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने जानकारी गराएको पाँच महिना भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले पठाएको ऋण तिर्ने प्रस्तावको फ...
इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार युद्ध: ट्रम्पले चीनलाई दिए यस्तो धम्की
एजेन्सी । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार सम्झौताको विषयमा चलिरहेको कुराकानी अत्यधिक सुस्त गतीमा अघि बढिरहेको छ । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले करिब दुई सय अर्ब डलरको चीनियाँ वस्तुमा लाग्ने आ...